रिचार्ज कार्डमा कम्तीमा ६ वटा नं.मात्र देखिए पनि रिचार्ज गर्न सकिने — onlinedabali.com
रिचार्ज कार्डमा कम्तीमा ६ वटा नं.मात्र देखिए पनि रिचार्ज गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले रिचार्ज कार्डमा मेटिएर ६ वटा नं. मात्र देखिएका छन् भने पनि रिचार्ज गर्न सकिने जनाएको छ ।
यसका लागि ग्राहकले पहिलो चरणमा कम्पनीको वेबसाइटबाट आफैंले रिचार्ज गर्न सक्ने पनि जनाएको छ । कार्डको पिन नम्बर प्रष्ट नभएमा वा कोरिएमा ग्राहकले नम्बर बिग्रिएको रिचार्ज कार्डको सिरियल नं.रिचार्ज कार्डमा देखिने पिन नं.र रिचार्ज गर्नुपर्ने मोबाइल नं. उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
यसका लागि कम्पनीको वेबसाइटमा गएर पिन रिकभरीमा क्लिक गर्ने र लग अन गर्नुपर्छ । रिचार्ज कार्डमा भएका १६ अंकका पिन नम्बर मध्ये कमसे कम ६ वटा अंक देखिने हुनुपर्छ ।
यसरी देखिने पिन नम्बरलाई कार्डमा लेखिएको अवस्थामा राख्नुपर्छ र मेटिएको अंकमा ‘८’ चिन्ह राख्नुपर्छ । जस्तो कि पिन नम्बरको फम्र्याट १२३४५६७८९०१२३४५६ छ र बीचका पिन नम्बर मेटिएको वा नबुझिने छ भने त्यही अनुसार १८८४५८७८८८१२८८५८ संरचना बमोजिम राख्नुपर्छ ।
यसरी रिचार्ज गर्दा पनि गलत भयो भने बढीमा १० पटकसम्म प्रयास गर्न सकिन्छ । यो भन्दा बढी पटक गलत तरिकाले रिचार्ज गर्न खोजियो भने वेबसाइटबाट सफल हुदैन र रिचार्ज कार्ड साट्नका लागि कम्पनीको काउन्टरमै जानुपर्ने हुन्छ ।
काउन्टरमा गएपछि यसको जाँच गरेर सोही मुल्यको नयाँ रिचार्ज कार्ड दिने व्यवस्था छ । वेबसाइटबाटै ग्राहकले आफंै नै रिचार्ज गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । भविष्यमा कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ र सर्ट कोडमार्फत् एसएमएस पठाएरसमेत रिचार्ज कार्ड साट्न सकिने व्यवस्था गर्ने कम्पनीको योजना छ ।